Thwebula Virtual DJ 8.2.3523 futhi 7.4.7 – Vessoft
Thwebula Virtual DJ
DJ Virtual – ithuluzi elinamandla ukudala noma hlela komculo we izinhlobo ezahlukene. Isofthiwe ephelele DJs professional nabaculi saqala. Virtual DJ kwenza ulungise ijubane sokudlala lwamafayela exubile alalelwayo, namaqiniso futhi nokuzala umsindo amarekhodi vinyl, khumbula isikhundla ivolumu ithrekhi, njll DJ Virtual iqukethe zomculo eziningi kanye nemiphumela musical ukudala umculo ahlukahlukene digital. Futhi isofthiwe iyahambisana nabaqondisi kakhulu umculo futhi MIDI-amadivayisi.
Ukukhetha elikhulu zokubethwa
Ukuba khona imiphumela ezahlukene umsindo
sokudlala Ongokoqobo amarekhodi vinyl
Iyahambisana kunazo umculo isilawuli
Amazwana on Virtual DJ:
Virtual DJ Ahlobene software:
Umhleli Audio Isofthiwe enamandla ukudala umculo futhi amamiksi ehlukahlukene. Isofthiwe isekela spectrum ebanzi amathuluzi kanye nemiphumela for the DJing professional.
Isiqophi converters Umhleli Audio Enye yezinto eziholela video abahleli ngokusekelwa komsindo enamandla. Isofthiwe unikeza amathuba ububanzi ukudala ividiyo professional in high.
Converters zomsindo Umhleli Audio Umhleli elula audio ukusebenza ne-MP3-files. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi cindezela amathrekhi audio ngaphandle izinga ukulahlekelwa.
Українська, Français, Español, Deutsch... Guitar Pro 6.1.8.11683
Umhleli Audio Isofthiwe ukusebenza nge-keyboard, umoya kanye string zomculo. Isofthiwe isebenzisa ubuchwepheshe of the umsindo enengqondo kunazo zomculo.
Abadlali Media Umhleli Audio Isiqophi converters Ukusebenza media player ngokusekelwa amathuluzi ukucubungula amafayela alalelwayo video. Isofthiwe isilinganisi multiband oyifisayo izinga ukudlala amafayela abezindaba.
Umhleli Audio Iphakethe Umshayeli ukuqinisekisa ukudlala elungile imifudlana audio. Isofthiwe okusezingeni bandwidth imvamisa futhi isekela uxhumano kumadivaysi ehlukahlukene audio.
Umhleli Audio Isofthiwe ukusebenza umculo izinhlobonhlobo ezihlukene. Isofthiwe ine amathuluzi amaningi nemiphumela for the professional umculo indalo.
English, Українська, Français, Español... Ableton Live 9.7
Umhleli Audio Isofthiwe ukudala umculo studio of izinhlobo ezahlukene. Isofthiwe isekela isethi elikhulu zomculo kanye inqwaba imiphumela ehlukile umsindo.
Umhleli Audio Ephelele umculo umhleli amaphuzu zomculo nge ukusebenza ububanzi. Isofthiwe inikeza wokusindisa noma thwebula nezitayela ezihlukahlukene zezinhlamvu, izakhi umculo uhlelo search ethuthukisiwe.
English, Afrikaans, Українська, Français... EaseUS Data Recovery Wizard 10.8 Free, Pro futhi Email
Akwazi ukugcina Isofthiwe ukuze alulame idatha nezinhlobo ezahlukene. Isofthiwe uyakwazi alulame amafayela elahlekile noma ayitholakali kusukela kumadivayisi ezahlukene kanye nedatha ezithwala.
English, Français, Español, Deutsch... DVD Decrypter 3.5.4
Ukubethelwa Umbuso ukuvikela amafolda futhi amafayela usebenzisa iphasiwedi benethuba wokusungula amazinga ehlukene ukuvikelwa. Isofthiwe ivikela ulwazi kusuka kucis ngengozi futhi virus ukutheleleka.
English, Français, Español, Deutsch... SUPERAntiSpyware 6.0.1228 Free Edition futhi Professional
Antiviruses Ithuluzi ukuvikela ikhompyutha yakho ngokumelene izinsongo ehlukahlukene. Isofthiwe kwenza ukubona izinhlobo ezahlukene amagciwane kanye bathole amafayela onegciwane sodwa.
Teamviewer 12.0.71503 Standard, QuickSupport futhi Portable
CCleaner 5.24.5841 Standard, Professional futhi Portable